Bazohleka bodwa abalandeli beMaritzburg | IOL Isolezwe
Bazohleka bodwa abalandeli beMaritzburg
Isolezwe / 15 June 2012, 10:59am /
KWEHLE amaphaphu kubalandeli beMaritzburg United abese bebambe umoya ngokuthi leli qembu lingase lifudukele eNelson Mandela Bay, ePort Elizabeth, ngesizini ezayo.
Kuvele ukuthi iTeam of Choice, ebidotshwa ngesamba sika-R20 million ngumasipala iNelson Mandela Bay ukuze idlalele imidlalo yayo yasekhaya yesizini ka-2012/2013 eNelson Mandela Stadium iqoke ukuqhubeka nokuzinza eMgungundlovu ngenxa yokuthi isicelo sikamasipala besingesekiwe yiziphathimandla zakhona.
Isikhulu esiphezulu seMaritzburg uFarouk Kadodia ukuqinisekisile ukuthi abalandeli baleli qembu basazolibona ligijima eHarry Gwala Stadium ngesizini ezayo. Kuthiwa isinqumo sokuqhubeka nokuzinza eMphithi sithathwe ngoLwesithathu emuva kokuhlangana kwesigungu esiphezulu sabaphathi beqembu.
“SingabaseMaritzburg futhi sisazohlala khona, asiyi ndawo. Sinabalandeli abaningi kule ndawo,” kusho uKadodia.
Yize lesi sikhulu siqale sayiphika indaba yokuthi bahlanganile bengabaphathi beqembu ukucubungula isicelo seNelson Mandela Bay kodwa sigcine sivumile ukuthi basengaxoxa nalo masipala uma ubuya sewesekwe nguhulumeni.
Imibiko yayizolo iveze ukuthi lo masipala unxuse iMaritzburg ngaphandle kokuxhumana nazo zonke izinhlaka zawo. Lokhu kuholele ekutheni abanye, okuthiwa le ndaba bebeyizwa okokuqala ngoLwesibili, bayikhahlele ngazo zombili.
ITeam of Choice ibivele incinda kumasipala waseNelson Mandela Bay kwazise ngesizini edlule kuthiwa ibihlomula u-R750 000 emdlalweni ngamunye kwemithathu eyidlale eNelson Mandela Bay Stadium.
UKadodia utshele Isolezwe ukuthi ngabe abazange basilalele isicelo ebesingenza iKwaZulu-Natal isale namaqembu amabili ku-Absa Premiership ukube uhulumeni wesifunda uvule izandla ngokulinganayo.
“Imali inikwa abathize kulesi sifundazwe, asazi thina ukuthi kufanele senzenjani ekubeni kuyithina kuphela esingenabo abaxhasi ku-Absa Premiership,” kusho uKadodia.
“Ukube sihambile wonke umuntu ubezokhala kodwa akekho ozimisele ngokusihlangabeza ngezindleko zokusimamisa iqembu.”